PVC extruder, PVC Ishidi Line, Spc zaphansi Izinsiza kusebenza - Jiahao
Imishini yaseShanghai JIAHAO igxile ekunikezeni izixazululo zeTrunkey zamaphepha wepulasitiki ahlukahlukene noma iphrojekthi yokukhiqiza yebhodi.
Isungulwe ngonyaka we-2007 futhi ibisebenza ngokusemthethweni ezimbonini zePlastic Extrusion.
Kuqale kusuka kumikhiqizo esekwe ku-PVC imigqa ye-Extrusion, i-JIAHAO Imishini inikeze ngemigqa nezinsizakalo kumakhasimende ahlukahlukene asekhaya kanye nakwamanye amazwe.
Kuze kube ngo-2021, sesizuze inqubekelaphambili enhle kakhulu ngokwandisa insizakalo yethu kusuka kwinto esekwe ku-PVC kuya ezinhlotsheni eziningi zePlastiki.
Isipiliyoni seminyaka engama-24
Imikhiqizo engaphezu kwengu-18
Ngaphezulu kwezigidigidi ezi-2
Umugqa we-SPC WOKUPHAKATHI
I-WPC FOAM BOARD LINE
I-WPC FLOOR LINE
SPC UKUPHATHA / PVC VINYL UKUPHAKA
/ I-PVC IPLANGI LOKUPHAKA
I-co-extruder iyingxenye ebalulekile yobuchwepheshe be-co-extrusion. It is ngokukhethekile zenzelwe ukujwayela ukuhamba okuncane kwe-co-extrusion futhi ukwazi ukuxhumana nezinhlobo ezahlukahlukene zababungazi. Umehluko wesakhiwo phakathi kwe-co-extruder ne-extruder ejwayelekile ikakhulukazi ekwakhiweni kohlaka. Ngokwefreyimu ehlukile, i-co-extruder ingahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili: uhlobo lwangaphandle nohlobo oluku-inthanethi. Ama-co-extruders wangaphandle angahlukaniswa abe mpo, enezingqimba futhi emincane i-co-extr ...
Zonke izinhlobo ze-JHP parallel twin screw extruders inkampani yethu eyiklama ikakhulukazi ukukhiqiza i-SPC / LVT flooring ne-PVC pipe ne-PVC pelletizing nge-plasticity, ikhwalithi engaguquki, ukukhiqizwa okuphezulu, ukusetshenziswa okubanzi nokuqina okude. Parallel twin isikulufa extruder umshini unezinto ezimbili ongakhetha kuzo kumitha ejwayelekile yokulawula nohlelo lokulawula ikhompyutha kanye nezinketho ezimbili ze-DC ne-AC eqhutshwa uhlelo lwemoto. Idizayini eyenziwe kahle futhi isikulufa esenziwe ngobunono nemiphumela yomgqomo ku-plasticity enhle kakhulu Kuthuthukile ...
I-twin eyindilinga eyindilinga
Zonke izinhlobo ze-JHZ extruders inkampani yethu eyiklama ikakhulukazi ukukhiqiza iphrofayili ye-PVC / WPC ne-PVC ipayipi eline-plasticity, ikhwalithi engaguquki, ukukhiqizwa okuphezulu, ukusetshenziswa okubanzi nokuqina isikhathi eside. Umshini we-Conical twin screw extruder unezinketho ezimbili ekulawuleni imitha okuvamile nasistimu yokulawula ikhompyutha kanye nezinketho ezimbili zohlelo lwe-DC ne-AC oluqhutshwa yimoto. I-Conical twin screw extruder iyinsiza esebenza kahle yokuxuba neye-extrusion. Umshini unezici zesilinganiso esincane se-shear, kunzima ...
Isikulufa extruder esisodwa
Isikulufa extruder esisodwa sakhiwa ngesikulufu se-Archimedean esijikeleza emgqonyeni oshisayo. Ngenxa yesakhiwo sayo esilula, ukukhiqizwa okulula, ukusebenza kahle kokusebenza okuphezulu nentengo ephansi, isetshenziswa kabanzi. Ubuchwepheshe obukhule kakhulu nohlobo olusetshenziswe kakhulu lwe-extruder. Njengamanje, isikulufa extruder esisodwa sakhiwe kusukela kwesakhiwo sokuqala sokuvunguza, njenge-damping screw block, isikulufa se-exhaust, isigaxa sesikulufa, iphayiphu yomgqomo, isakhiwo sebhulokhi nezinye izakhiwo ezihlukile ...
Ishidi le-PC eliqinile / i-Hollo ...
Operation ukusebenza ntathu ezintathu Ukukhiqizwa li ...
I-PVC ibhodi lamahhala lamahhala luhlobo lwebhodi le-foam le-PVC ...
Ishidi le-PVC elingabonakali ...
Ishidi elisobala le-PVC linokuningi ...
Umkhiqizo Weshidi Elithambile le-PVC ...
I-eauipment isebenza ku-p ...
PVC RIGID CORE Ishidi E ...
Imodeli JHZ80 / 156 / JHZ92 / 188 / JHZ ...
PVC Ishidi zokuhlobisa E ...
I-PVT Marble Sheet Line iyimvelo entsha ...
Ifenisha yeKhabhinethi ye-WPC ...
Wood-plastic ibhodi uhlobo ngokhuni (izinkuni cell ...
SPC zaphansi Ishidi / Wa ...
Umugqa we-SPC WOKUFAKA AMAKHASI we-Extrusion hhayi kuphela ongakwazi ...
I-PVC-WPC FOAM BOARD MACHINE OPERATION TIPS
Ibhodi le-foam le-PVC lihlukaniswe laba ngamagwebu wamahhala nokuqhuma amagwebu. Isetshenziswa kabanzi ezimotweni zabagibeli, ophahleni lwezimoto zesitimela, izingqimba zomgogodla wekhabethe, amapaneli wokuhlobisa ngaphakathi, ukwakha amaphaneli odonga angaphandle, amapaneli angaphakathi okuhlobisa, amahhovisi, izindawo zokuhlala, amabhlogo wokwakha umphakathi, ...
Izindlela zokulungisa ezivamile ze-plastic extruder
Inqubo yesondlo ye-plastic extruder ngokuvamile ihlukaniswe yaba ukugcinwa kwansuku zonke nokugcinwa njalo. Izinqubo ezimbili zesondlo ziyahambisana futhi zibalulekile. Umhleli olandelayo uzokwethula imininingwane edinga ukunakekelwa kokujwayelekile ...